လင်းပြာနွေ: March 2012
နင့်မာနတွေ အရောင်တင်နိုင်ခဲ့ရုံဆို တော်ပြီ.....။
Posted by လင်းပြာနွေ at 8:57 PM2comments:
မှတ်မှတ်ရရ.....ကျွန်မ စိတ်ဒဏ်ရာဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးထိတွေ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မအသက် ၁၁ နှစ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ၅ တန်းနှစ်က။ ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာ စာသင်နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးတိုင်း နှုတ်ဆက်ပွဲဆိုတဲ့ ပွဲလေးလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီနေ့ဆို ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက ၀တ်ကောင်းစားလှလေးတွေ ၀တ်လာပြီး၊ သီချင်းတွေ ဆိုကြတယ်။ ဂိမ်းတွေကစားကြတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ လဲကြတယ်။ အဲဒီနေ့ဆို မုန့်တွေကျွေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိတယ်။ စာသင်နှစ်ပြီးကာနီး အချိန်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ အရမ်းပျော်ကြတာ။
ကျွန်မက အဲဒီကျောင်းကို ပြောင်းတာ ၂ နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ ကျွန်မမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲပေါင်းတဲ့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မနဲ့က တစ်ဝန်းတည်းနေကြတာ။ သူက ကျွန်မထက်တော့ အသက် ၂ နှစ်လောက်ကြီးမယ်ထင်တယ်။ သူနဲ့ကျွန်မ ကစားဖော် ကစားဖက်၊ ကျောင်းသွားဖော် သွားဖက်တွေ။
ကျွန်မက အဲဒီကျောင်းကို ပြောင်းလာတာ မကြာသေးတော့ အဲဒီနှစ်မှ A တန်းဝင်တယ်။ အတန်းဖော်တွေနဲ့လည်း သိပ်မရင်းနှီးသေးတဲ့အချိန်ပေါ့။ ကျွန်မတို့ အတန်းထဲမှာဆို စာတော်တဲ့ ကောင်မလေးတွေက ပေါ်ပြူလာဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီကောင်မလေးတွေကလည်း နည်းနည်း လူကြီးဂိုက် ဖမ်းနေကြပြီ။ ကျွန်မက စာတော်တဲ့ထဲပါပေမယ့် ကလေးစိတ် မကုန်ဘဲ မျောက်ရှူံးအောင် ဆော့်တာကတစ်ကြောင်း၊ မဲမဲတုံးတုံးလေးဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်တော့ မရှိလှဘူး။ နောက်ပြီး A တန်းကို ၀င်လာတဲ့ လူသစ်ဖြစ်နေတော့ မြို့ကျောင်းကလေးတွေသဘာဝ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နိုင်ကြတယ်။
အဲဒီနှစ်က စာသင်နှစ်ကုန်ကာနီးလေ နှုတ်ဆက်ပွဲနေ့ကို ကြိုတွေးပြီး ပျော်လေပေါ့။ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းလည်း သီချင်းဝင်ဆိုချင်ကြတယ်။ နှုတ်ဆက်ပွဲမှာ သီချင်းဆိုမယ့်သူတွေ စာရင်းပေးဖို့ အတန်းခေါင်းဆောင်က လိုက်ကောက်တယ်။ သူက အမြဲအတန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်ထားခံရတယ်။ အတန်းခေါင်းဆောင်ပီပီ အသံကလည်း ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ......ဆရာကြီးကလည်း အားကြီးလုပ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့သူတွေကို မျက်နှာလိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်လည်း ရှိတယ်။ အဲဒီလို မထင်မပေါ်လူတွေဆို နှိမ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးကလည်း ရှိတယ်။ ကလေးတုန်းကတော့ ကလေးနှိမ်နှိမ်တာပေါ့နော်။ ကျွန်မတော့ သူ့ကို ဘူဇွာကြီးလို့ ခေါ်တာပဲ။ အဲဒီနေ့က စာရင်းလိုက်ကောက်တော့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လည်း စာရင်းပေးခဲ့ကြတယ်။
စာမေးပွဲအတွက်လည်း စာကျက်နေရတဲ့ကြားက ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်တူတူဆိုမယ်ဆို သဘောတူလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဘာသီချင်းဆိုရမှန်းမသိဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မတို့ ရင်းနှီးတာဆိုလို့ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေပဲရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ အိမ်ဘေးမှာနေတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက ကလေးတွေကို ချစ်တယ်။ ကျွန်မတို့က ညဘက်ဆို သူ့အိမ်မှာ အမြဲသွားသွားကစားလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ သွားကစားတိုင်း အဲဒီ အဒေါ်ကြီးက ဂစ်တာတီးပြီး စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းတွေ ဆိုဆိုပြတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း သူဆိုပြနေကျ ဘီးနံပါတ် OK သုည 122 အလ် တို့၊ မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူးတဲ့၊ ချယ်ရီပင်အောက်နောက်တစ်ခေါက်တို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ပဲ ရင်းနှီးနေခဲ့တယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လည်း စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတော့ မသိဘူး အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ နေရစ်တော့ကွယ် သွားတော့မယ် ဆိုတဲ့သီချင်းကို ရွေးလိုက်ကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မသူငယ်ချင်း သီချင်းတိုက်ကြတယ်။ နှစ်ယောက်အတူဆိုမှာဆိုတော့ ပြိုင်တူဆိုပြီး တိုက်ရတာပေါ့။ သီချင်းကလည်း အလွန်ကို အေးပါတယ်။ ခုနေပြန်နားထောင်ရင်တောင် အလွန်အိပ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ သီချင်းမျိုး။ အဲဒီတုန်းက ငါးတန်းကလေးအရွယ်နဲ့ ဘာကြောင့်ဆိုဖို့ ရွေးခဲ့လည်းတော့ မသိဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကလည်း Chorus အပုဒ်ရောက်လာရင် ကီးက ကြောင်ကြောင်နေပြန်တယ်။ သူက သီချင်း မဆိုတတ်ဘူး။ ကျွန်မကတော့ သီချင်းတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးတော့ရှိတယ်။ ကီးဝင်အောင်တော့ ဆိုတတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ ညညဘက်ဆို အဲဒီ ရှမ်းအဒေါ်ကြီးအိမ်မှာ သီချင်းသွားသွားတိုက်ရတယ်။ ကျွန်မတို့ ဆိုမယ့်အိုက်တင်ကိုပါ ကျင့်ရတယ်။ ဒီလိုသီချင်းမျိုးနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ စစ်ချီတေးဆိုသလိုပါပဲ ....တောင့်တောင့်ကြီးတွေရပ်ပြီး အလွန်မှ အေးတဲ့ သီချင်းကို ခဏခဏဆိုကျင့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းအသံကလည်း နည်းနည်း ဘဲသံလို ရှဲရှဲရှဲရှဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လောက်တိုက်တိုက်လည်း အဲဒီ "ခွဲရကာနီးမှ နှုတ်မဆက်နိုင်တယ်" ဆိုတဲ့နေရာရောက်တာနဲ့ ကီးကကြောင်တော့တာပဲ။ နောက်တော့ ဘယ်လိုမှ တိုက်မရတော့ ဒီလိုပဲ အပြီးသတ်လိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲနေ့ရောက်လာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အားလုံးက လှလှပပလေးတွေ ၀တ်စားလာကြတယ်။ သီချင်းဆိုမှာပါတဲ့သူတွေကဆို ပိုပြီးတော့ ပြင်လာကြတာပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း အတန်းခေါင်းဆောင်ကတော့ ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာနဲ့ စီမံနေရတာကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်နေတယ်။ သူက အဲဒီလိုနေ့ပွဲတွေတိုင်းလည်း အမြဲ အခန်းအနားမှူးလုပ်နေကျ။ အခမ်အနားအစီအစဉ်လည်း သူပဲ ပြင်ဆင်တယ်။ ဟိုလူ့ဟောက် ဒီလူ့ဟောက်လည်း လုပ်နေသေးပြန်တယ်။ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းလည်း လချီပြီး ကြိုတိုက်ထားတဲ့ သီချင်းကို ဆိုရတော့မယ်ဆို ကြိုတင်ရင်ခုန်နေကြတယ်။ ကျွန်မတို့ အဲဒီနေ့က အလှအပပြင်သလား မပြင်သလားတော့ ကျွန်မသိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရင်ခုန်နေတာတော့ မှတ်မိတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အခန်းအနား စပါတယ်။ အတန်းခေါင်းဆောင် ဘူဇွာကြီးက အခန်းနားအစီအစဉ်တွေ တခုခုပြီးတစ်ခု ဖတ်ပြသွားတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မတို့သီချင်းဆိုမယ့် အစီအစဉ်ကို နောက်ဆုံးမှာထည့်ထားတယ်။ ကျွန်မတို့ရှေ့မှာတော့ ပေါ်ပြူလာ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အစီအစဉ်တွေ အများကြီးထည့်ထားတယ်။ စိတ်ထဲတော့ မကျေမနပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ငါတို့ကျ နောက်ဆုံးထည့်ထားတယ်ပေါ့။
အဲဒီမှာ ဘူဇွာကြီးက သီချင်းဆိုမယ့်လူက ဘယ်သူ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆို ကြေငြာနေလိုက်တာ တကယ့် ခန်းနားမှူးကြီးလို ဟန်ပါပါနဲ့ပေါ့။ ကျွန်မတို့အတန်းထဲက ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးတွေက ဘာသီချင်းတွေဆိုကြလဲဆိုတော့ အဆိုတော် မေဆွိတို့၊ နောင်တို့ရဲ့ "ငရုတ်သီး" သီချင်းတို့ဘာတို့ စတဲ့ ခပ်မြူမြူး ခေတ်ပေါ်သီချင်းလေးတွေနဲ့ ကကြဆိုကြတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း သဘောကျတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲတော့တွေးမိတယ် ကျွန်မတို့ သီချင်းက အေးများနေသလားပေါ့.. စစ်ချီတေးလို တောင့်တောင့်ကြီးဆိုပြီး ကီးကြောင်ကြီးနဲ့ ထထအော်ရင် ကဲ့ရဲ့များခံရမလား နည်းနည်းတော့တွေးမိတယ်။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆိုပြီးသွားတိုင်း ကျွန်မတို့အလှည့်ရောက်လာတော့မယ်ဆို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ရင်း ညနေပိုင်းကလည်း ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မထင်မှတ်ပါပဲ ကျွန်မတို့အလှည့်ရောက်မယ့် အချိန်မှာ ဘူဇွာကြီးက သီချင်းဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်း ထကြေငြာလိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့လည်း တော်တော် စိတ်တိုသွားပြီး ဘူဇွာကြီးကို သွားထပြောတဲ့အချိန်မှာ အချိန်မရှိတော့ဘူး ဂိမ်းကစားတော့မှာမို့ ပြီးပြီဆို ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မတော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလောက် ကြိုးစားပမ်းစား တိုက်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်းကို မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မဆိုလိုက်ရပါဘဲ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီကျောင်းမှာ ကျွန်မဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိ နေခဲ့ပေမယ့် နောင်နှစ်တွေမှာ ကျွန်မဘယ်တော့မှ သီချင်းဝင်မဆိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီဘူဇွာအတန်းဖော်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နှစ်တိုင်း အတန်းခေါင်းဆောင်နဲ့ MC လုပ်မြဲပါပဲ။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာလည်း အနှိမ်ခံရလို့လား၊ လူသစ်မို့လား၊ ပေါ်ပြူလာဖြစ်သူ မဟုတ်လို့လား၊ မဲမဲတုံးတုံးလေးမို့လား ဆိုပြီး ဘာကိုမှန်းမသိ မှတ်မှတ်ရရ နာနာကျင်ကျင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်တွေကြာလာခဲ့တယ်။ ကျွန်မလည်း တက္ကသိုလ်တတ်၊ ပြည်ပမှာ ပညာဆက်သင်ပြီး သင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဆရာမဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တနေ့ကျတော့ ကျွန်မအတန်းသစ်တစ်ခုကို စ၀င်ရတဲ့နေ့ပေါ့။ ကျွန်မကို ကျောင်းသားတစ်ယောက်က တရင်းတနှီးကြီး လာနှုတ်ဆက်တယ်။ "ဟဲ့ .. နင်ဒီမှာ ဆရာမလုပ်နေတာလား" ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘူဇွာကြီးဖြစ်နေတယ်။ " ငါဒီမှာ သင်တန်းလာတတ်တာလေ" တဲ့ သူပြောတယ်။ "နင်ငါ့ကို မမှတ်မိဘူးလား" တဲ့။ မှတ်မိတာပေါ့..။ ကျွန်မရဲ့ ကလေးဘ၀စိတ်ဒဏ်ရာကြီးပဲ...။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မဘူဇွာကြီးတို့ အတန်းကို စာသင်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ပြုံးလိုက်မိတယ်..။ နောက်ပြီး ကျွန်မကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိတယ်။ တိမ်တွေနဲ့ လင်းလင်းချင်းချင်း ပြီးတော့ ကျွန်မ အသံထွက်ပြီးပဲ ရယ်လိုက်မိပါတယ်.. ပထမတစ်ကြိမ်ပြုံးလိုက်မိတဲ့ အပြုံးအတွက် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ရယ်မိတာပါ။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းမဆိုရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာဟာ အဲဒီကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာ အလွန်ကို ရီစရာကောင်းစွာနဲ့ ကျေပျက်သွားခဲ့ပါပြီ။
အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မ နာကျင်မှုကို ပုံသဏ္ဍန်မျိုးစုံနဲ့ သင်ယူနေခဲ့ရပါပြီ။ မျှော်လင့်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါ၊ လိုချင်ရက် မရယူနိုင်တဲ့အခါ၊ မလိုချင်ပါဘဲ ရယူလိုက်ရတဲ့အခါ၊ အကြောင်းပြချက်မရှိ ရှုံးနိမ့်လိုက်ရတဲ့အခါ၊ အမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေကို နှလုံးသွင်းလိုက်ရတဲ့အခါ၊ ချစ်ခင်သူတွေ ခွဲခွါသွားတဲ့အခါ၊ ပိုင်ဆိုင်နေကျအရာတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါ စသဖြင့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်နဲ့ နာကျင်မှုတွေကို သင်ယူနေခဲ့ရတယ်။ နာကျင်မှုတစ်ခု ဒဏ်ရာအဖြစ် မြုံကျန်ခဲ့မယ့်အချိန်တိုင်း အဲဒီလို တိမ်တွေနဲ့ လင်းလင်းချင်းချင်းကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ရင်း အဲဒီလို အသံထွက်ရယ်မောရင်း ကလေးဘ၀က စိတ်ဒဏ်ရာလေးလိုပဲ ရီစရာကောင်းစွာ ကျေပျက်သွားအောင် ကျွန်မကြိုးစားနေထိုင်နေပါတော့တယ်......။
၂၄ မတ်လ ၂၀၁၂
Posted by လင်းပြာနွေ at 9:45 PM No comments:
ကွန်ကရစ် လမ်းမကျယ်တွေ ထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့မြို့
နီယွန်မီးတွေ အပြိုင်းအရိုင်း ပြိုကျနေတဲ့မြို့
ရုရှဖက်ဒရေးရှင်းလို Shock Therapy နည်းနဲ့
Transition နောက် ဒရောသောပါး လိုက်လိုက်ရတဲ့မြို့
လွင်ထီးခေါင် အလှတရားတစ်ခု ရှိနေသေးလို့သာ
မော်တော်ဆိုက်ကယ် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု ရှိနေသေးလို့သာ
မြို့ကြီးသားလေထုတွေရဲ့ ကျေးတော်ကျွန်တော်ဘ၀ မကျရောက်သေးလို့သာ
(၁၁ မတ်လ ၂၀၁၂ အမှတ်တရ)
Posted by လင်းပြာနွေ at 2:57 PM No comments:
ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားနေကျ ကစားနည်းတစ်ခုရှိတယ်။ "တန်ခူးလမှာ ဘာရွက်လဲ" လို့ ပြေးမဲ့လူကမေးရင်လိုက်မယ့်သူတွေက "ပိတောက်ရွက်" ၊ "ကဆုန်လမှာ ဘာရွက်လဲ" စသည်ဖြင့် ၁၂ လရာသီအလိုက် မေးတဲ့လူကမေးရပြီး လိုက်မယ့်သူက အရွက်နာမည်တွေကိုဖြေ၊ အဲဒီဖြေလိုက်တဲ့အရွက်ကို ဖမ်းတဲ့လူ လိုက်မမှီခင် အမှီရအောင် ရှာခူးရတယ်။ အဲဒီလိုရှာခူးနိုင်ဖို့ကို သစ်ပင်နဲ့ အရွက်တွေကို အရင် သင်ယူထားရတာပေါ့။
ကျွန်မငယ်ငယ်ကဆို သစ်ပင်တွေကို သိပ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်သွားပြီဆို ဟိုဟာ ဘာပင်လဲ.. ဒီဟာဘာပင်လဲ မေးလွန်းလို့ ကျွန်မနဲ့ အတူသွားတဲ့လူကြီးတွေဆို ကျွန်မကိုပြောတယ် နင်တော့ ကြီးလာရင် သစ်ပင်တွေအကြောင်း သင်ရတဲ့ အလုပ်မျိုး လုပ်မယ်ထင်တယ်တဲ့။
သစ်ပင်တွေအကြောင်း ကျွန်မ စပြီးမှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဆို ကျွန်မ လေးနှစ် သမီးလောက်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မတို့ နေရတဲ့ ၀င်းကြီးက အကျယ်ကြီး... အရင်က သင်္ချိုင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့တောင်ပြောကြတာ။ အဲဒီဝင်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်မတို့နေတဲ့ ၂ လုံးတွဲ နှစ်ထပ်အိပ်ကလေး ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မ အဖေဘက်က အမျိုးတွေ နဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ အားလုံးစုနေကြတယ်။ အဲဒီဝင်းကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်ဝေးဝေးမှာ ကျူပင်တွေ တရုန်းရုန်းထနေတဲ့ တောကြီးရှိတယ်။ အဲဒီတောကြီးကိုမရောက်ခင် ရေကန်ကြီးတွေ၊ ကန်သင်းတွေလည်း ဖြတ်ရတယ်။ အဲဒီရေကန်တွေထဲမှာ သဲကန်ကြီး တစ်ကန်လည်းပါတယ်။ အဲဒီကန်ထဲမှာ ပုစွန်တွေလည်းပေါတယ်။ ငါးတွေလည်း မျှားလို့ရတယ်။ ကျူတော ကြီးထဲမှာတော့ မြွေတွေပေါတယ် ပြောကြပေမယ့် ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေ တစ်ယောက်မှတော့ မြွေနဲ့ မတိုးခဲ့ကြဘူး။ သဲကန်ကြီးထဲဆို ကျွန်မအစ်ကိုတွေက ဒိုင်ဗင်ပစ်နေကျ။ ကျွန်မက အဲဒီတုန်းက ငယ်သေးတော့ ကျွန်မအစ်ကိုတွေ ဘောင်းဘီစဆွဲပြီး တကောက်ကောက် လျှောက်လိုက်နေတဲ့ အရွယ်ပေါ့။ သူတို့ ကစားဝိုင်းတွေထဲ မပါရလို့ ငိုငိုယိုယိုနဲ့ တိုင်တန်းတတ်လွန်းလို့ ကျွန်မကို ငယ်ငယ်က လူဆိုးမလို့ မကြာခဏပြောကြတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပါ .. အဲဒီဝင်းကြီးရဲ့ မြောက်ဘက်အရပ်မှာ ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။ အဲဒီညောင်ပင်ကြီးမှာ ကျစ်ကြိုးကြီးနှစ်ချောင်းကို သစ်သားပြား တစ်ပြားမှာ ချည်ထားပြီး ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေ ဒန်းလုပ်စီးတတ်ကြတယ်။ ကျွန်မအစ်ကိုတွေက ကစားပြီဆို မျောက်ရှုံးအောင် ဆာ့ကြတယ်။ မောင်နှမတွေလည်းများ၊ လွတ်လည်း လွတ်လပ်တော့ ဘေးမဲ့တောထဲက တိရစ္ဆာန်လေးတွေလို မီးကုန်ယမ်းကုန် ကစားတတ်ကြတယ်။ အဲဒီညောင်ပင်ကြီးမှာ ဒန်စီးပြီဆို လေထဲကို လွင့်နေအောင်ကို လွှဲကြတာ။ ကျွန်မကလည်း သူတို့စီးတော့ ငိုငိုယိုယို စီးမယ်လုပ်တော့ သူတို့ အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ အမြင့်ကြီးရောက်အောင် လွှဲ၊ ကျွန်မကလည်း အဲဒီလိုများစီးရပြီဆို ပျော်တာမှ။ ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့နေ့တွေပေါ့။ အဲဒါနဲ့ကျွန်မတို့အတွက် အဲဒီ ညောင်ပင်ကြီးက ကစားရပ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကျွန်မမှတ်မိသလောက် အဲဒီညောင်ပင်ကြီးမှာ နတ်ပူဇော်တာတွေ မကြာခဏ လာလာ လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ အမေတို့က ကျွန်မတို့ကို အဲဒီမှာ မဆော့ဖို့ အမြဲမှာတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေကတော့ အဲဒီ နှစ်ချို့ ညောင်ပင်ကြီးကို တအားသံယောဇဉ်ကြီးကြတယ်။
တစ်နေ့ကျတော့ ကျွန်မ ဗိုက်ထဲမှာ အလုံးကြီးတစ်လုံး ပေါ်လာပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အောင့်အောင့်လာတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျွန်မမောင်လေးက မွေးကာစ လသားလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မဗိုက်အောင်ပြီဆို မချိမဆန့် ခံစားရတယ်။ ဗိုက်ထဲက အလုံးကြီးကလည်း ဟိုပြေးလိုက် ဒီပြေးလိုက်နဲ့ တအားခံစားရတာလို့ အမေက ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်မဆေးရုံတွေ မကြာခဏ တက်ရတယ်။ ကျွန်မမောင်လေးက ကျွန်မဆေးရုံပဲတက်နေရတော့ အမေနို့မစို့ရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျွန်မဆေးရုံတစ်ခုကဆင်းလာပြီး မကြာဘူး နောက်တစ်ခု တက်ရလိုက်နဲ့.. ကလေးဆေးရုံပေါင်းများစွာကို လှည့်တက်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ ကျွန်မဗိုက်ထဲကအလုံးကြီးကလည်းဓာတ်မှန်ရိုက်လည်းမမြင်ရဘူးတဲ့။ ပေါ်လာပြီး ပျောက်တဲ့အခါကျ ပြန်ပျောက်သွားပြန်သတဲ့။ အဲဒီရက်တွေမှာ ကျွန်မရောဂါဖြစ်ရတာ နတ်ပြုစားတာများလားဆို ကျွန်မအဒေါ်က စပြီး သံသယာဝင်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ညောင်ပင်းကြီးဆီ သွားသွားဆော့လို့ တခုခုဖြစ်တာဆို ယုံကြည်စိတ်က ပိုပြင်းထန်လာကြတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်မလည်း ဆေးရုံတတ်ရလိုက် ပျောက်လို့ ပြန်ဆင်းလာလိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေစဉ် တစ်နေ့မှာ.. ကျွန်မအဒေါ်က အလုပ်သမားတွေငှားပြီး အဲဒီညောင်ပင်ကြီးကို ခုတ်လှဲလိုက်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ငယ်ငယ်လေးအလျောက် ၀မ်းပန်းတနည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီညောင်ပင်ကြီး မရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကို ကျွန်မမှတ်မှတ်ရရ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ပြန်သတိရတတ်တယ်။ ညောင်ပင်ကြီးမရှိတော့ ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေလည်း ဒန်စီးရမယ့် နေရာမရှိကြတော့ဘူး။ ညောင်ပင်အောက် မြေတလင်းမှာလည်း သွားမဆော့ဖြစ်ကြတော့ဘူး။ ကျွန်မဗိုက်ထဲက အလုံးကြီးလည်း နောက်ဆုံးအခေါက် ဆေးရုံအတက်မှာ ခွဲစရာမလိုဘဲ ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မအဒေါ်နဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကတော့ အဲဒါညောင်ပင်ကြီး ခုတ်လှဲလိုက်လို့ ပျောက်သွားတာလို့ ယုံကြည်နေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မကတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး ညောင်ပင်ကြီး မရှိတော့တာပဲ ၀မ်းပန်းတနည်း ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက် ကျွန်မတို့ အိမ်ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မတို့ မိသားစုကတော့ အိမ်တွေသိပ်ပြောင်းတဲ့ မိသားစုတစ်စုပါ။ အဖေတို့က နယ်လှည့်ဝန်ထမ်းလည်း မဟုတ်ပါဘဲ အိမ်တွေတော့ သိပ်ပြောင်းရပါတယ်။ ကျွန်မနောက်ပြောင်းရတဲ့ အိမ်မှာလည်း မြေတလင်းကျယ်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ နေရတဲ့ အိမ်က ပြိုလဲကာနီးလေးမို့ ၀ါးပိုးလုံးကြီးတွေနဲ့ ထိုးကန်ထားရတယ်။ အိမ်ပေါ်ထပ်မှာ ၀ါးကပ်လိုကြမ်းမျိုး ခင်းထားတာမှတ်မိတယ်။ အဲဒီ ၀ါးကြမ်းခင်းထဲမှာ ညဆို ကြွက်တွေ ပွက်လောရိုက်နေတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အဲဒီ အိမ်လေးမှာလည်း ပျော်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်မတို့ မိသားစုချည်းပဲသက်သက် နေခဲ့ရတဲ့ အိမ်ကလေးပါ။ အဲဒီခြံထဲက မြေတလင်းထဲမှာ စံပယ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ စံပါယ်တွေပွင့်ချိန်ဆို တအားမွှေးတာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစံပယ်ပင်တွေက ကျွန်မတို့ ပိုင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူများ ပိုင်တဲ့အပင်တွေပါ။ ကျွန်မက စံပါယ်ပန်းလေးတွေတော့ ကလေးတစ်ယောက် သဘောကျပုံမျိုးနဲ့ သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပန်းနံ့တွေတော့ အဲဒီထဲက မကြိုက်လှဘူး။ အဲဒီခြံထဲမှာ နောက်ထပ် ဒညင်းပင်၊ သနပ်ခါးပင်၊ သရက်ပင်တွေနဲ့ မာကလာပင်တွေလည်း ရှိတယ်။ သနပ်ခါးပင်က သစ်ကိုင်းပျော့ပျော့လေးတွေဆို ကျွန်မ တစ်သက်မမေ့ဘူး။ ကျွန်မ အတန်းထဲမှာ စာမေးပွဲဖြေလို့ အဆင့်တစ်မရခဲ့ရင် အဲဒီသစ်ကိုင်းနဲ့ ကျွန်မအစ်မဆော်တာ ခံရပြီသာမှတ်။ ဒညင်းပင်အောက်က မြေတလင်းမှာဆို ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအစ်ကိုတွေ ကုလားမဆီး နင်းနေကျ။ မြေတွေက သဲဆန်တဲ့မြေမို့ ကလေးပီပီ သိပ်လူးလို့ကောင်းတဲ့ မြေတွေပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့မွေးထားတဲ့ ခွေးအကြီးကြီး နှစ်ကောင်လည်း ရှိတယ်။ အဲဒီခွေးကြီးတွေကို ဒညင်းပင်အောက်က မြေတလင်းကြီးမှာ ခွခွစီးရပြီဆို ကျွန်မသိပ်ပျော်တာ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မအသက် ၇ နှစ်နဲ့ ၈ နှစ်ကြား ကာလတွေထင်တယ်။ ကျွန်မတက်ရတဲ့ကျောင်းက ၄၅ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်သွားရတယ်။ အဲဒီ ၄၅ မိနစ်မှာ မိနစ် ၃၀ လောက်က ၀ါးရုံတောရှိတဲ့ လမ်းကြီးကို ဖြတ်ရတယ်။ လေတအားတိုက်တဲ့အချိန်ဆို ၀ါးရုံပင်တွေ ယိမ်းထိုးပြီး တရွှီးရွှီးမြည်နေတာ မော့မော့ကြည့်ပြီး ကျွန်မ တအားသဘောကျခဲ့တာ။ ပြီးတော့ အိမ်နားမှာ သဲချောင်းလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီသဲချောင်းလေးတွေထဲ ခြေတွဲလောင်းချထိုင် ၀ါးပင်က ၀ါးရွက်လေးတွေကို လှေလုပ်ပြီးမျှော၊ နောက် ချောင်းထဲဆင်းပြီး ငါးသလဲတိုးလေးတွေ လက်ခုပ်လေးနဲ့ ဆင်းဆင်းဖမ်းနဲ့ ကျွန်မမှာ အားလပ်ချိန်ကို မရှိသလောက်ပဲ။ ကျောင်းအားရက်တွေဆို ကျွန်မ မာလကာပင်ကြီး နှစ်ပင်ပေါ်ရောက်ရောက်နေတတ်တယ်။ ကျွန်မအစ်ကိုတွေ ဒညင်းပင်ကြီးပေါ်တက်တော့ ကျွန်မလိုက်တက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ၇ နှစ်အရွယ်မို့ မတက်နိုင်ဘူး။ ကျောင်းအားရက်တွေဆို ကျွန်မတက်နေကျ မာလကာပင်ကြီး၂ ပင်ရှိတယ်။ လေတိုက်လို့ ယိမ်းထိုးနေတဲ့ သစ်ကိုင်းတွေကိုစီး၊ မိုးရွာကာနီး အုံ့မှိုင်းပြီးလှနေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့် ပြီးတော့ မာလကာသီးတစ်လုံးကို လက်ကကိုင်စား တကယ့်ကို စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းထဲက ပျောက်ဆုံးနေသော နိဗ္ဗန်ဘုံတစ်ခုလိုပါပဲ။ နောက်မကြာဘူး ကျွန်မတို့ မိသားစု အိမ်ပြောင်းရပြန်ပါတယ်။ မှတ်မိတယ် ကျွန်မ ကိုးနှစ်အရွယ်ပေါ့။ အဲဒီ မြေတလင်းရယ်၊ မာလကာပင်ကြီးနှစ်ပင်ရယ်၊ ခွေးကြီးတွေရယ်ပါ ထားခဲ့ရလို့လား၊ ကျွန်မပဲ ပိုပြီးခံစားတတ်လာလို့ပဲလား မသိ ညောင်ပင်ကြီး ခုတ်လှဲတာထက် ပိုပြီး မှတ်မှတ်ရရနဲ့ ခံစားခဲ့ရတယ်။
ကံတော့ကောင်းတယ်။ ကျွန်မတို့ နောက်ပြောင်းရတဲ့ အိမ်က သဲချောင်းတွေ၊ ၀ါးရုံတောတွေ၊ စံပယ်ခင်းတွေ မရှိပေမယ့် ခြံကြီးဝန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုပဲ။ အဲဒီခြံဝန်းထဲမှာ ရှေးဟောင်းဂေဟာကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီဂေဟာကြီးက အစိုးရပိုင်ပါ။ ကျွန်မတို့က အဲဒီဂေဟာကြီး အနောက်က အစိုးရတန်းယားတွမှာ နေရတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မတို့မိသားစု ကျွန်မအဒေါ်နဲ့အတူ ပြန်ပေါင်းနေရတယ်။ အဲဒီခြံဝန်းကြီးထဲမှာ ရေတမာပင်တွေရှိတယ်။ ခေါင်းလောင်းပန်းပင်တွေ၊ ဂျပန်နှင်းဆီးတွေ၊ ယူကလစ်ပင်တွေ၊ ပုံဏရိပ်ပင်တွေ၊ တိုက်ကပ်ပန်းပင်နဲ့ စက္ကူပန်းပင်တွေ၊ ဂေါ်သဇင်ခြံစည်းရိုးပင်တွေ နောက် ကျွန်မအချစ်ဆုံး ကန့်ကော်ပင်တွေရှိတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်မအချစ်ဆုံး ဆောင်းရာသီတွေ ရှိတယ်။ ဆောင်းရောက်ပြီဆို ကန့်ကော်ပင်တွေထိပ်ဖျားပဲ ကျွန်မအမြဲတမ်း ရောက်ရောက်နေတတ်တယ်။ ကန့်ကော်ရနံ့တွေ တသင်းသင်းနဲ့ ဆောင်းတွင်း ကာလတွေ ကျွန်မမမေ့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကျောင်းက မနက် ၉ နာရီတက်ရတယ်။ ကျောင်းက အိမ်နဲ့နီးတယ်။ မနက် ၇ နာရီ ၈ နာရီထိ ကျွန်မ ကန့်ကော်ပင် အဖျားမှာရှိနေတတ်တုန်း။ ကျောင်းသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လှမ်းနှုတ်ဆက်လို့ကောင်းတုန်း။ အဲဒီချိန် ကျွန်မ ကဗျာတွေစာတွေ ခံစားတတ်စဖြစ်နေပြီ။ သီချင်းတွေလည်း ခံစားတက်နေပြီ။ ၁၁ နှစ် ၁၂ အရွယ်.. မှတ်မိတယ်.. ကန့်ကော်ပင်ဖျားမှာ ဗဒင်သီချင်းလေး တညီးညီးနဲ့ မနက်ခင်းတွေ။ မကြာပါဘူး အဲဒီကန့်ကော်ရနံ့သင်းတဲ့ နံနက်ခင်းတွေလည်း ကျွန်မချန်ထားရစ်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကာလတချို့မှာတော့ မြို့သစ်ရပ်ကွက်တစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြန်တယ်။ မြို့သစ်အိမ်က သစ်ပင်တွေ ဖြစ်ထွန်းလောက်အောင် မြေခံမကောင်းပါဘူး။ ခြံကျယ်ကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မတို့ပြောင်းကာစက လည်ပတ်ကြား ကွဲအက်အက်မြေပေါ်မှာ ထင်းရှူးပင်လေးတွေ အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာမှာ စစိုက်ထားခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်လေးကို ဆေးအဖြူရောင်လေး သုတ်ထားတယ်။ ကျွန်မတို့မိသားစုတွေချည်းပဲ ပြန်နေရလို့ ပျော်စရာတော့ကောင်းတဲ့ ကာလတွေပါ။ ကျွန်မ ၈ တန်း ၉ တန်း အရွယ်.. ကျွန်မအစ်ကိုတွေ ဂစ်တာတီးသင်ပေးလို့ တဒေါင်ဒေါင် တဒင်ဒင်လုပ်တတ်နေပြီ။ တချို့ ၀တ္ထုစာအုပ်တွေကို ခိုးဖတ်ပြီး လှုပ်ခတ်တတ်တဲ့ အရွယ်ပါ။ ၁ နှစ် ၂ နှစ် အကြာမှာ ထင်ရှူးပင်လေးတွေ အပြိုင်းအရိုင်းကြီးလာခဲ့ပြီ။ မြို့သစ်ဆိုတော့ အပူအအေးလွန်ကဲပြီး လေတိုက်လည်းကြမ်းတမ်းတယ်။ ညဘက်တွေဆို လေနဲ့ ဝှေ့ရမ်းနေတဲ့ ထင်းရှူးပင်တန်းတွေကြားထဲကနေ လင်းထိန်နေတဲ့ အိမ်ဖြူဖြူလေးကို လှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုး ကျွန်မ တစ်သက်မမေ့ပါဘူး။ အဲဒီထင်းရှုးပင်တွေအောက် ခုံတန်းမှာ ထင်းရှူးပင်တွေကပြောတဲ့ ဂီတကို နားထောင်ရင်း (ထင်းရှူးပင်တွေက လေချွန်တယ်လေ) ကျွန်မ အစ်ကိုတွေက ဂစ်တာတီး ကျွန်မက သီချင်းတွေဆိုနဲ့ .. ထင်းရှူးနံ့သင်းတဲ့ ကာလတွေကို အခု လက်ရှိ ကျွန်မတို့နေအိမ်ကို ပြောင်းရတဲ့ခါ ထားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ခုတော့ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ဘာသစ်ပင်မှ မရှိပါဘူး။ လှေကားထစ်တွေရှိတယ်။ သစ်ပင်ဖျားက ခံစားရတဲ့ အရသာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အထပ်မြင့်တဲ့အတွက် အဝေးက တိုက်လာတဲ့ လတ်ဆက်တဲ့ လေအေးတွေကို ခံစားခွင့်တော့ရှိတယ်။ အိမ်ရှေ့အိမ်နောက် တစ်မိနစ်လောက်တောင် လျှောက်စရာမလိုဘဲ ရောက်နိုင်တယ်။ အချိန်မရှိ အချိန်ရှိမှ အိမ်ပြန်လို့ရတယ်။ တိုက်ခန်း ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတယ်။ မြို့ပြအငွေ့အသက်တွေရှိတယ်။ ငါးကင်ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်း ထွန်းကားတယ်။ တခါတရံ တန်ခူးအခါတွေ လမ်းထိပ်က ပျံ့လွင့်လာတတ်တဲ့ ပိတောက်ရနံ့ကို ရှူရှိုက်ရတာကလွဲလို့ ပန်းရနံ့တွေ ဆိတ်သုန်းတယ်။ ၂၅ - ၃၀ အရွယ်၊ နှလုံးသားလည်း ထိရှမလွယ်တော့ပေမယ့် ငယ်ငယ်တုန်းက သစ်ပင်တွေကို လွမ်းစိတ်ကတော့ အမြစ်တွယ်တုန်း။ သစ်ပင်တွေရှိတဲ့ အရပ်တွေရောက်ရင် ငယ်ငယ်တုန်းကလို တလှပ်လှပ်ပျော်တုန်း။ ခရီးသွားရင်း သဲချောင်းငယ်တွေ တွေ့ရင် ငါးဆင်းဖမ်းချင်တုန်း၊ မာလကာပင်တွေတွေ့ရင် တက်ခူးစားချင်တုန်း။ ၀ါးရွက်ငယ်တွေတွေ့ရင် လှေလုပ်လွှတ်ချင်တုန်း။ ထင်းရှူးပင်တွေတွေ့ရင် သီချင်းတွေ ငြီးချင်တုန်း။ ညောင်ညိုပင်ကြီးတွေတွေ့ရင် ဒန်းဆင်ပြီး စီးချင်တုန်း... ဒါပေမယ့် .... ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးကိုတော့ ပြန်ရှာမတွေ့နိုင်တော့ပါ...........။
၂၀ မတ်လ ၂၀၁၂
၉ ၃၀ ညနေ
Posted by လင်းပြာနွေ at 7:34 PM4comments:
ပြုစုယူယဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးလား …
သူ့မှာလည်း နွေးထွေးတဲ့ နေရောင်ကို
သူ့မှာလည်း ပေါင်းမြက်၊ ပိုမွှားတွေရဲ့ရန်က
စိတ်ဓာတ်နဲ့ အားမာန်မျိုး ရှိနေပေမယ့်
နှလုံးသားနဲ့မှ အသိအမှတ်ပြုမှု ခံယူဖို့ လိုအပ်နေသေးတဲ့
Posted by လင်းပြာနွေ at 1:25 PM No comments:
မလျှိုမ၀ှက် ဌာန်ကုန်ရိုးသားခဲ့လို့ ရှုံးရသတဲ့
ဒါဆို .. အဲဒီအရာ အရှုံးမဟုတ်ဘူး သေချာတယ် …..။
သဘာဝကျကျ ရိုးရိုးလေး ရှင်သန်ရအောင်ပါ
သိမ်းပိုက်ခြင်းကို အလှတရားတစ်ခုလို့တော့ မမြင်ဘူး……။
Saturday, March 17, 2012 at 3:44pm
နာကျင်မှုကို ဘယ်လို စာလုံးနဲ့ ပေါင်းမလဲ….
လူတစ်ယောက်ဟာ ချစ်တတ်တယ် မချစ်တတ်ဘူး ဘာနဲ့တိုင်းမလဲ ….
ညစဉ် မက်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးနဲ့
ဒါနဲ့ ညီမျှတဲ့ ခံနိုင်ရည်မျိုး
တစ်ဖက်မှာ ငါ့ကို ပေးခဲ့သင့်တာပေါ့ လောကဒဏ်ရယ် ..
အဲဒီလို ယုံတောင်ပြေး ခွေးမြောက်လိုက် အတွေးတွေနဲ့
နာကျင်မှုက ဆေးမတိုးတော့တဲ့ အခြေနေ ..
အများသုံး ပေတံကြီးနဲ့လည်း ချစ်ခြင်းကို ငါမတိုင်းခဲ့ဖူးဘူး
တစ် နှစ် သုံး ရေမယ်
အချစ်ကို ငါ ပိုတွက်ခဲ့မိပြီလား
ဘ၀ဟာ သင်ယူစရာ များမှန်းသိတယ်
သိတယ်ဆိုတဲ့ အသိလည်း ရှိတယ်
၁၀နာရီ ၃၀ မိနစ်
၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
Posted by လင်းပြာနွေ at 1:16 PM No comments:
သင်တို့ မိမိကိုယ်ကို ကော်ဖီကြိုက်သူလား .. လက်ဖက်ရည် ကြိုက်သူလား ခွဲခြားသိပါရဲ့လား။ ဥပမာ သင်ဟာ ကြက်ဥကြိုက်သူ ဆိုပါစို့ .. သင်ဟာ ကြက်ဥရဲ့ အကာကို ကြိုက်သူလား.. အနှစ်ကို ကြိုက်သူလား မိမိ ကိုယ်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာဖူးပါရဲ့လား။ ထို့အတူ သင်ဟာ ကန်ဇွန်းရွက် ကြိုက်သူ ဆိုပါစို့ .. သင်ဟာ ကန်ဇွန်းရွက် အရိုးနှင့် အရွက် မည်သည်အား ပို၍ ကြိုက်နှစ်သက်ပါသနည်း။ သင်တို့ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာဖူးပါရဲ့လား….
ကျွန်မသည် ကော်ဖီကြိုက်သူ ဖြစ်သည်။ ကန်ဇွန်းရွက်တွင် အရိုးအား ပိုကြိုက်သူဖြစ်ပြီး ကြက်ဥတွင်တော့ အနှစ်နှင့် အကာ မည်သည်အား ပိုကြိုက်နှစ်သက်သည်ကို ယခုထိ မခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာနိုင်သေးပါ။ ကျွန်မ ကော်ဖီကြိုက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ အတော်အတန် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကန်ဇွန်းရွက်အရိုးအား ကျွန်မ ပို၍ ကြိုက်နှစ်သက်မှန်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ မကြားသေးမီ ကပင် ဖြစ်သည်။ သေချာသည်မှာတော့ ကျွန်မသည် ကော်ဖီကြိုက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတရံ ကျွန်မတို့သည် မိမိကိုယ်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာဖို့ရာ မေ့လျော့နေသည် (သို့) မေ့လျော့ ထားကြသည်ဟု ကျွန်မ ထင်မြင်မိသည်။ ဘ၀တွင် ကော်ဖီ ကြိုက်သူတစ်ယောက်သည် လက်ဖက်ရည်အား မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သည် အထင်နှင့် တစ်ဘ၀လုံး ရွေးချယ်နေခဲ့ကြသူများလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဘ၀မှတ်တိုင် အချိုးအကွေ့များ တိုက်စား သွားခဲ့ပေမည်။ ထိုသူ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်ဖီ ကြိုက်သူမှန်း မည်သည့် အချိန်တွင်မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်နည်း။ အချို့လူများအတွက် အချိန်တိုနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း အချို့ ရှာဖွေရကောင်းမှန်းမသိ တစ်ဘ၀လုံး မေ့လျော့ သွားခဲ့သည်များလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တို့ရော မိမိရွေးချယ်ခဲ့မှုများသည် မိမိစိတ်ဝိညာဉ်၏ တောင့်တမှု အစစ်မှန်များ ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့လား။ သို့ဆိုလျှင် စိတ်၏ တောင့်တမှု အစစ်မှန်များကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ပါသလား။ ထိုသို့ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကောင်းခြင်း (သို့) ဆိုးခြင်း ဖြစ်ပါသလား။ မသေချာပါ…
ကျွန်မသည် ကော်ဖီကြိုက်သူ တစ်ယောက် အဖြစ် ရာနှုန်းပြည့် သေချာပါသည်။ မည်သည့် အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကော်ဖီကိုသာ ကျွန်မရွေးချယ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မည်သည့် အရပ်သို့ ရောက်နေနေ ထို ကော်ဖီတစ်ခွက် ရှိရာအရပ်သို့ မဖြစ်မနေ သည်းသည်း မည်းမည်း ကျွန်မ ရောက်ရှိခဲ့သည် ချည်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်မသည် မိမိ စိတ်ဝိညာဉ်၏ တောင့်တမှု အစစ်မှန်ကိုသာ ရွေးချယ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မသည် မိမိ ကိုယ်ကို လှည့်ဖျားသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်မ ရွေးချယ်မှုများ၏ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း များမှာ အသေချာပါ။ မသေချာခြင်းဆိုသည်မှာ ၀ှက်ဖဲမမည်သော ၀ှက်ဖဲတစ်ချက်လည်း ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝိညာဉ်၏ တောင့်တမှု အစစ်မှန်တိုင်းသည် စိတ်အာဟာရအား ဖြစ်စေပါသလား (သို့) အကောင်း အဆိုးအဖြေတစ်ခုအား ထုတ်ပေးနိုင်ပါသလား။ ပို၍ပင် မသေချာပါ။ ဘ၀တွင် တိုင်းတာရ အခက်ဆုံးသောအရာသည် အကောင်းနှင့် အဆိုး ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်မထင်ပါသည်။ စိတ်၏ တောင်းတမှု တိုင်းသည် ကျွန်မတို့အား ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့မှုများ ပေးနိုင်ပါခဲ့ရဲ့လား။ တဖျက်ဖျက် တရိပ်ရိပ် တုန်ရင်နေသော၊ ပုံမှန်ထက် အချက်များ စွာ ခုန်နေသော ရင်အစုံ၊ မွမ်းကြပ်မောပန်းမှု များနှင့် များစွာသော ဘေးထွက်နာကျင်မှု များအားလည်း ကျွန်မစွဲလန်းသော ကော်ဖီ တစ်ခွက်က ပေးစွမ်းနိုင်လေသည်။ သို့သော် ကျွန်မစွဲလန်းစွာ တရှိုက်မက်မက် ရွေးချယ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့ နာကျင်ခံစားနေရသော ခဏငယ်တိုင်းတွင် စိတ်၏ တောင့်တရာ ကိုသာ စွဲမြဲ ခိုင်မာစွာ ရွေးချယ်ခဲ့သော ကျွန်မ .. ရွေးချယ်မှု ၊ အကောင်း အဆိုးနှင့် မသေချာခြင်းများ အပေါ်ေ၀၀ါးစွား အဖြေထုတ်နေခဲ့မိပါသည်။ ကျွန်မတို့သည် မည်သို့သော သတ္တ၀ါများနည်း။
ကျွန်မ၏ ရွေးချယ်မှု တိုင်း၌ စိတ်ပျော်ရွှင် သာယာမှု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် စိတ်ထိခိုက်ပွန်းပဲ့ နာကျင်မှု ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အချိုးကျစွာ ရောနှောပေါင်းစပ်ထားခဲ့သည် မှန်သော်လည်း ကျွန်မသည် စိတ်၏ တောင့်တရာ အစစ်မှန်ကို သာ ထပ်၍ ရွေးချယ်ဦးမည်မှာ သိပ်ကို သေချာနေခဲ့ပါသည်။ သို့သော် နောင်အနာဂတ် ကျွန်မ၏ ရွေးချယ်မှုများ အတွက် နာကျင်မှုဒဏ် အတောင်အသင့် ခံနိုင်သော စိတ်ပဋိပက္ခအားေ ဖြေရှင်းနိုင်သည့် လုံလောက်သော အဖြေ ကျွန်မ ယခုထိ ရှာဖွေရန် ခဲယဉ်းနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ သေချာသည်မှာတော့ ကော်ဖီသည် ကျွန်မအတွက်တော့ ချည်တိုင်တစ်ခုပင် ဖြစ်နေပါသေးသည်။ သို့သော် ကျွန်မသည် စိတ်၏ တောင့်တရာ အစစ်မှန်ကို သာ ရွေးချယ်ကြပါဟု မည်သူ့ကိုမှ တိုက်တွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်သလို ကျွန်မကိုယ်တိုင်တွင်တော့ မိမိစိတ်၏ တောင့်တရာ အစစ်မှန်ကိုသာ ဆက်လက် ရွေးချယ်ဖြစ်နေဖြစ်ဦးမည်မှာ သေချာပါသည်။
သြဂုတ်လ ၇ ရက် ၂၀၀၉
Posted by လင်းပြာနွေ at 1:14 PM No comments: